Zimbabwe's Main Opposition Headed for Another Split? - allAfrica.com
Zimbabwe's main and biggest opposition the MDC-T is on the brink of another major split again as its two heavyweight leaders both claim 'rights to the throne'. The party's Vice President Thokozani Khupe has announced that her camp was breaking away from new MDC-T leader Nelson Chamisa-led group adding that she would be joining Joice Mujuru's Rainbow Coalition. Khupe has been embroiled in a bitter race with Nelson Chamisa to succeed the late Morgan Tsvangirai as the leader of the opposition party.
New Zimbabwe, 19 March 2018
The MDC-T's power struggle took a turn for the worst Sunday after vice president Thokozani Khupe announced that she would be joining former vice president Joice Mujuru's Rainbow… Read more »
Opposition leaders Nelson Chamisa and Thokozani Khupe (file photo).
Zimbabwe: Khupe, Chamisa Feud Turns Nasty
Zimbabwe Standard, 18 March 2018
The tension between MDC-T leaders Nelson Chamisa and Thokozani Khupe has escalated amid allegations the two are plotting to expel each other from the party. Read more »
Zimbabwe: MDC-T Not Collapsing - Chamisa
- Khupe has differences with the party not Chamisa Read more »
Zimbabwe: Opposition MDC-T Appoints Nelson Chamisa as President
The MDC-T National Executive Council has resolved to appoint Nelson Chamisa as the substantive president and 2018 election candidate of the party with immediate effect. Read more »
MDC-T President Nelson Chamisa is scheduled to meet party deputy Thokozani Khupe in a bid to resolve a bitter leadership wrangle, which has been characterised by violent clashes. ... Read more »
Zimbabwe: Chamisa Pushes for Khupe Deal
Nelson Chamisa's appointment was certainly quick, much faster than could have been achieved had the opposition MDC-T party called for an extraordinary congress to elect Morgan ... Read more »